Saraakiil ka tirsan AMISOM oo booqday Jaziiradda Kudha – Radio Daljir
Luulyo 8, 2015 3:37 b 0
Arbaco, Luuliyo 08, 2015 (Daljir) — Saraakiil isugu jirta Jubbaalnd iyo Amisom, oo uu hogaaminayo Taliyaha guud ee Amisom Jonathan Rono ayaa booqasho indha indheyn ah ku garay Jaziiradda Kudhaa ee Gobolka Jubbadahoose. Saraakiishan ayaa booqatay dhammaan fariisimaha ay halkaas ku leeyihiin ciidamada Amisom iyo Daraawiishta Jubbaland.
Saraakiishan ayaa la sheegay in ay u bogeen diyaargarowga Ciidamada isgarabsanaya, iyaga oo soo mid mid u soo kormeeray dhammaan dhufeysyada iyo saldhigyada ciidamada halkaas ku sugan.
Kormeerkan saraakiishan ka socotay Amisom iyo Jubbaland ku soo indha-indheeyeen saldhigyada ciidamada degaanadaas, ayaa la filayaa inuu xiriir la leeyahay howlgallo ka dhan ah Alshabab, oo dhawaan la filayo inay ka bilowdaan guud ahaan Jubbaland.
Dhanka kale Gobolka Gedo ayey ciidamada Jubbaland iyo Amisom ka wadaan dhaqdhaqaaq la soodayo in lagu xoreeyo deegaanada harsan, iyadoo ciidamada isgarabsanaya ay maalma ka hor ka soo ruqaansadeen, deegmada Dolow, waxaana la filayaa in jeeraan fogeyn Baardheere la qaban doono.